I-infrared Thermopile isivamvo soMlinganiso woBushushu obungenakunxibelelana STP9CF55
Inzwa ye-STP9CF55 ye-thermopile infrared (IR) yomlinganiso wobushushu ongadibaniyo yi-thermopile sensor
ukuba namandla ombane ophuma ngokuthe ngqo kulandelelwano lwesehlo se-infrared (IR) samandla emitha. Enkosi kwi
Uyilo lokungenelela oluchasene ne-electromagnetic, i-STP9CF55 yomelele kuzo zonke iintlobo zokusingqongileyo kwesicelo.
Ukuchaneka okuphezulu kwe-infrared Thermopile isivamvo soMlinganiso woBushushu ongadibaniyo STP9CF55H
Inzwa ye-STP9CF55H ye-infrared infrared (IR) yomlinganiso wobushushu ongadibaniyo yi-thermopile IR sensor enesiphumo sombane wombane ngokuthe ngqo kumandla ombane we-infrared (IR). Ngophawu lokuphendula ngokukhawuleza, ubungakanani be-compact kunye nokuthembeka okuphezulu, kwaye kukho ubuchwephesha bokuchaneka okuphezulu obugxunyekwe kwigobolondo yephakheji, enokuthi ibuyekeze ubushushu bemo kwaye akukho mfuneko yokulinganisa i-NTC. Ngombulelo kuyilo lokuphazamiseka kokuchasana nombane, inzwa yomelele kuzo zonke iintlobo zemo yesicelo kwaye isetyenziswa ngokubanzi kwimilinganiselo yeqondo lobushushu emzimbeni.
Isilumko se-IR Thermopile sokuBonwa kobushushu boMzimba STP9CF55C
Inzwa ye-STP9CF55C ye-infrared infrared (IR) yomlinganiso wobushushu ongadibaniyo sisenzisi se-thermopile
Uyilo lokungenelela oluchasene ne-electromagnetic, i-STP9CF55C yomelele kuzo zonke iintlobo zokusingqongileyo kwesicelo.
Isinxibelelanisi se-Thermopile IR esingadibaniyo nokubeka esweni ubushushu kwi-STP9CF59
I-STP9CF59 ye-infrared sensor ye-infrared sensor yemilinganiselo yeqondo lobushushu elinganxibelelani ne-sensor ye-thermopile
Uyilo lokungenelela oluchasene ne-electromagnetic, i-STP9CF59 yomelele kuzo zonke iintlobo zokusingqongileyo kwesicelo.
Ukuchaneka ngokuNgenaLungelo ngokuPhakamileyo kweThermopile ye-Infrared Sensor yokulinganisa ubushushu STP9CF59H
I-STP9CF59H ye-infrared sensor ye-infrared sensor yomlinganiso wobushushu ongadibaniyo yi-thermopile sensor
Uyilo lokungenelela oluchasene ne-electromagnetic, i-STP9CF59H yomelele kuzo zonke iintlobo zokusingqongileyo kwesicelo.
Ubushushu bomzimba Ubhaqo olungenaNxibelelwano lwe-infrared Thermopile Sensor STP9CF59L0
I-STP9CF59L0 inzwa ye-infrared thermopile ye-infrared ye-non-contact contact measurement yi-thermopile sensor enesiginali esivelisayo esilingana ngokuthe ngqo kumandla ombane we-infrared (IR). Enkosi kuyilo longenelelo lwe-electromagnetic, STP9CF59L0 yomelele kuzo zonke iintlobo zemo yesicelo.
I-STP9CF59L0 equka uhlobo olutsha lwe-CMOS ye-thermopile sensor chip enobuntununtunu obufanelekileyo, ubushushu obuncinci bokulingana kwemvakalelo kunye nokuzala okuphezulu kunye nokuthembeka. Ukuchaneka okuphezulu kwe-chip ye-thermistor chip ikwadityaniswa kwimbuyekezo yeqondo lobushushu.
Ubushushu beDijithali yoMzimba Ukulinganisa ukungadibani ne-infrared Thermopile Sensor STP10DF55
I-STP10DF55 inzwa ye-infrared thermopile ye-infrared ye-thermopile sensor ngumlinganiso we-thermopile sensor onombane wesiphumo sombane ngokuthe ngqo ngokuthe ngqo kumandla e-infrared (IR) amandla emitha. Enkosi kuyilo longenelelo lwe-electromagnetic, STP10DF55 yomelele kuzo zonke iintlobo zemo yesicelo.
I-STP10DF55 equka uhlobo olutsha lwe-CMOS ye-thermopile sensor chip enobuntununtunu obufanelekileyo, ubushushu obuncinci bokulingana kwemvakalelo kunye nokuzala okuphezulu kunye nokuthembeka. Ukuchaneka okuphezulu kwe-chip ye-thermistor chip ikwadityaniswa kwimbuyekezo yeqondo lobushushu.
I-Thermometer ye-infrared yovavanyo lokuNxibelelana kobushushu kwiThermopile Sensor STP10DF55C
I-STP10DF55C infrared sensor ye-thermopile yomlinganiso wobushushu ongadibaniyo yi-thermopile sensor enesiginali esivelisayo esilingana ngokuthe ngqo kumandla ombane we-infrared (IR). Enkosi kuyilo longenelelo lwe-electromagnetic, STP10DF55C yomelele kuzo zonke iintlobo zemo yesicelo.
I-STP10DF55C equka uhlobo olutsha lwe-CMOS ye-thermopile sensor chip enobuntununtunu obufanelekileyo, ubushushu obuncinci bokulingana kwemvakalelo kunye nokuzala okuphezulu kunye nokuthembeka. Ukuchaneka okuphezulu kwe-chip ye-thermistor chip ikwadityaniswa kwimbuyekezo yeqondo lobushushu.
Isandi sombane esinyusiweyo se-IR sokufumana ukuKhanya koBushushu boMzimba STP10DF55C-AD
I-STP10DF55C-AD equka uhlobo olutsha lwe-CMOS ye-thermopile sensor chip enobuntununtunu obufanelekileyo, ubushushu obuncinci bokulingana kwemvakalelo kunye nokuzala okuphezulu kunye nokuthembeka. Iphakheji yonyuso ye-TO-Can yamkelwe nge-STP10DF55C-AD, eyenza ukuba inzwa ihambelane netekhnoloji yokuphakama komphezulu. Ngaphaya koko, uphawu olusezantsi kwe-STP10DF55C-AD luqinisekisa ukuchaneka kwendibano ye-IR sensor. Olu luyilo lukhethekileyo luphucula ukuphindaphinda kwendlela ebonakalayo ye-IR. Ke, ukuchaneka kobushushu obungenakunxibelelana kuqinisekiswe yi-STP10DF55C-AD.
Ubushushu boluvo beThermopile IR Detector engenaLiso kuMzimba woLuntu Ukujonga i-STP11DF55
I-STP11DF55 inzwa ye-infrared thermopile ye-infrared sensor ye-non-contact isilinganiselo se-thermopile sensor esinamandla ombane ombane ngokuthe ngqo kumandla ombane we-infrared (IR). Enkosi kuyilo lokuphazamiseka kokuchasana nombane, i-STP11DF55 yomelele kuzo zonke iintlobo zemo yesicelo.
I-STP11DF55 equka uhlobo olutsha lwe-CMOS ye-thermopile sensor chip enobuntununtunu obufanelekileyo, ubushushu obuncinci bokulingana kwemvakalelo kunye nokuzala okuphezulu kunye nokuthembeka. Ukuchaneka okuphezulu kwe-chip ye-thermistor chip ikwadityaniswa kwimbuyekezo yeqondo lobushushu.
Ubhaqo lokungafumaneki kobushushu kwi-Thermopile IR Sensor ene-Optical Lens STP9C9L3
I-STP9C9L3 inzwa ye-infrared thermopile ye-infrared ye-non-contact lobungakanani bemilinganiselo ye-thermopile sensor ene-output signal voltage ehambelana ngqo ne-infrared (IR) yamandla emitha. Enkosi kuyilo lokuphazamiseka kokuchasana nombane, i-STP9C9L3 yomelele kuzo zonke iintlobo zemo yesicelo. Ilensi yefestile yokudityaniswa kwelensi yokujonga iyayiphucula i-DS's sensor ratio ukuya kwi-8: 1 ngoyilo lokwenza izinto ngokubonakalayo.I-STP9C9L3 enoluhlobo olutsha lwe-CMOS ehambelana ne-thermopile sensor chip ebonisa ubuntununtunu obufanelekileyo, ubushushu obuncinci bokulingana kwemvakalelo kunye nokuzala okuphezulu kunye nokuthembeka. Ukuchaneka okuphezulu kwe-chip ye-thermistor chip ikwadityaniswa kwimbuyekezo yeqondo lobushushu.
Ukuchaphazeleka kobushushu bomntu engadibaniyo nomlinganiso weThermopile IR Sensor STP11DF55C
I-STP11DF55C infrared sensor ye-thermopile yomlinganiso wobushushu ongadibaniyo yi-thermopile sensor enesiginali esivelisayo esilingana ngokuthe ngqo kumandla ombane we-infrared (IR). Enkosi kuyilo lokuphazamiseka kokuchasana nombane, i-STP11DF55C yomelele kuzo zonke iintlobo zemo yesicelo.
I-STP11DF55C equka uhlobo olutsha lwe-CMOS ye-thermopile sensor chip enobuntununtunu obufanelekileyo, ubushushu obuncinci bokulingana kwemvakalelo kunye nokuzala okuphezulu kunye nokuthembeka. Ukuchaneka okuphezulu kwe-chip ye-thermistor chip ikwadityaniswa kwimbuyekezo yeqondo lobushushu.